Tallaabo tallaabo tallaabo ah: Saamaynta qoraalka majaajilada ee Adobe Illustrator | Abuurista khadka tooska ah
Saamaynta qoraalka majaajilada ah (cashar loogu talagalay Adobe Illustrator)
Lua louro | | muujiye, Tababarada
Marka hore, cadee tan tutorial Waxaa lagu sameeyay Adobe Illustrator CS5 (oo Ingiriisi ah), sidaa darteed sawirrada tallaabo-tallaabo ayaa muujinaya isugeynta noocaas. Xitaa sidaas oo ay tahay, waad ku tijaabin kartaa nooc kasta oo aad haysato, adoo tixgelinaya inay u badan tahay inay kugu kacayso waxoogaa dheeraad ah inaad raacdo casharka.
Saameyntani waxay noqon kartaa mid waxtar leh marka la samaynayo a naqshad aan rasmi ahayn taas oo qaabka majaajiladu la socoto waxa aad rabto inaad ku xiriiriso. Hoos waxaan kuugu keenaynaa cashar tallaabo-tallaabo ah si aad ugu guuleysatid saamaynta qoraalka majaajilada adoo adeegsanaya Adobe Illustrator.
1 Saamaynta qoraalka maadda ah
1.1 DULUCDA / TIXRAACA
1.2 MIDAYNTA MIDAYNTA
1.6 KU DARSAN STYLE
Saamaynta qoraalka maadda ah
Waxaan fureynaa Adobe Illustrator waanan tagnaa samee dokumenti cusub (Mac: Cmd + N Windows: Ctrl + N). Waan magacaabi karnaa wax kasta oo aan dooneyno oo waxaan dooran karnaa cabirka faylka. Kiiskeyga waxaan doortay 570 x 300 px, qaabka aan ugu isticmaalno Creativos Online si aan sawirada ugu soo qaadno.
Aad ayey muhiim u tahay, xagga hoose ee sanduuqa wada hadalka (Horukacsan), inaad hubiso inaad ku calaamadeysatay sida Muuqaalka Midabka RGB, Raster Raadka on Shaashad (72 ppi) y Hordhac Habka Hordhaca. Markaad haysato xulashooyinka aad dooratay, guji OK.
DULUCDA / TIXRAACA
Waxaan abuureynaa asalka midabada leh ee qoraalkayagu xiran doono. Waxaan doorannaa aaladda leydilaadka (Qalabka leykoolka, furaha M) waxaanna gujineynaa meel kasta oo ka mid ah dukumeentigayaga. Markaa daaqad yar ayaa furmi doonta taas oo noo oggolaan doonta inaan soo galno cabbirada leydiinka: waa inaad dhigtaa cabbirka dukumintigaaga. Xaalkayga, 570 x 300px. Riix OK oo leyliga aan hadda abuurnay ayaa ka soo muuqan doona shaashadda.
Hadda waa inaan si fiican u dhignaa. Si tan loo sameeyo waxaan dooran doonaa fallaarta madow ee ku taal bar-tilmaameedka, (Xulista Qalabka, Furaha V). Iyada oo aynnu ku riixeyno xadka leydilaalka oo, AADAN SII SOO ​​SAARAY, aan jiidi doonno soohdinta illaa ay kaga beegmayso cidhifyada dukumiintiga.
Asalka horey ayaa loo sameeyay, laakiin marka la eego waxaan arki doonaa isagoo cad oo leh xuduud madow. Waqti aad tan ku bedesho! Iyada oo fallaarta madow lagu xushay qalab ahaan (Xulista Qalabka, furaha V), waxaan gujineynaa leydi. Waxaan aadeynaa labada sanduuq ee midabada leh ee salka hoose ee aaladda: midda hore ayaa u dhiganta tan midab buuxi shaxdeena iyo tan gadaal, waxaa loola jeedaa TRAZO. Sida caadiga ah waxaan haysan doonnaa midab cad oo buuxa iyo midabka soohdinta madow. Waxaan gujineynaa sanduuqa buuxinta iyo kan midab doorta (Xulashada Midabka). Hadda, waxaad dooran kartaa midabka aad rabto asalkaaga. Xaaladdayda waxay ahayd buluug. Marka la doorto, dhagsii OK oo waxaad yeelan doontaa leydi midab leh.
Hada aan yeelno gees ka qaad. Guji sanduuqa ku yaal cidhifka barta qalabka. Hadda, wax yar ka hooseeya fagaarahaas, waxaa ku yaal laba jibbaaran caddaan yar oo leh jaantus casaan ah. Waan ku riixnaa ... waana intaas! Barxadani waxay u sheegaysaa Sawirqaadaha inaanu dooneyno istaroog aan midab lahayn. Haddii aan dooneynay buuxinta leydiilku inay iyaduna midab la'aan noqoto, waa inaan doorannaa sanduuqa u dhigma oo aan mar labaad gujino sanduuqa madhan.
Tallaabada xigta waa in lagu sameeyo weji wareeg ah oo ku saabsan asalkayaga. Si tan loo sameeyo, waa inaan tagnaa daaqadda Muuqaalka (haddii aadan ku arkin dhinaca midig ee shaashaddaada, sida aan ku muujiyey sawirka, u gudub menu-ka sare ee daaqaddaada Sawirka oo aad Daaqad> Appareer). Halkan, marka loo eego, waxaan arki doonnaa Fill ikhtiyaarka leh midabka aan ku dhejnay leydilaalka iyo Stroke option (stroke or contour), oo la socon doona Fursadda Madhan. Xulashada ugu dambeysa waa Opacity (opacity). Qeybta hoose ee daaqadaas, waxaa ku yaalo laba jibbaarane oo yaryar. Mid xuduud madow oo aad u ballaadhan leh iyo mid xuduud khafiif ah leh. Waxaan dooranaynaa midka ganaaxa, si Abuur buuxin cusub (Buuxi). Hadda, barxadda midabka ee buuxinta cusub ee aan abuurnay, ayaan gujinnaa. Falaar ayaa ka soo muuqan doonta dhinaceeda midig waxaana ka soo dhex xulaneynaa dhammaan muunadaha midabbada u muuqda, midka u dhigma wejigiisa wareegsan ee madow.
Waxaan abuureynaa buuxin cusub (Buuxi)
Xulashada wejiga wareegga wareega
Hadda waxaan fureynaa qeyb cusub adigoo gujinaya fallaarta dhanka bidix ee Fill oo guji erayga Opactiy, si loo beddelo habka lakabkayaga buuxinta loo dabaqi doono. Markaa halkaa, waxaan doorannaa ikhtiyaarka Hooska (Is-dul-saar)
Waxaan ka abuureynaa goobo cad cad bartamaha dukumiintigayaga. Si tan loo sameeyo, waxaan doorannaa qalabka Qalabka Ellipse, kaas oo noqon doona "gudaha" aaladda leydilaadka. Si aan u awoodno inaan doorano waa inaan gujinno muddo dheer, annaga oo aan sii deyn, sugeyna xulashooyinka la soo bandhigayo. Mar alla markii ay soo baxaan, OO AAN LOO SII DAAYN, waxaan ku dul wareejineynaa tilmaamaheena qalabka 'Ellipse Tool' oo waan sii deynaynaa
Waxaan u abuureynaa goob wareegsan (tan darteed, waxaan gujinaa oo jiidanaa inta aan ku heyno furaha Shift kumbuyuutarkayaga). Waxa caadiga ah ayaa ah in wareegga uu ku soo baxayo isla cabbiraadaha wejigii hore ee aan sameynay, marka waa inaan wax ka beddelnaa qiimaha buuxinta.
Hadda waxaan u jiheysaneynaa xarun. Tag Daaqad> Isku toosin iyo, OO LA XULAY XADGUDUB, guji xulashooyinka ka muuqda sawirrada.
Waxaan doorannaa qalabka qoraalka (Nooca Qalabka, furaha T) oo waxaan ku qoreynaa qoraalka aan rabno. Xaaladayada waxaan dooranay font BadaBoom BB, oo aad kala soo bixi karto DaFont.
Hadda aan yara rogno. Midig u guji qoraalka> Beddel> Xiirasho. Waxaan ku soo bandhigeynaa qiimaha -8º ee Vertical oo guji OK.
Waxaan udhignaa qoraalka si lamid ah tii aan horey udub dhexaad u aheyn wareegga cad.
KU DARSAN STYLE
Iyada oo qoraalka la xushay, waxaan tagnaa ikhtiyaarka UJEEDDO qaybta kore ee xulashada ballaariyo iyo, daaqadda la soo bandhigay, Waayahay. Kadib samee midig dhagsii qoraalka oo xulo ungroup (Uruur).
Aan u noqono Gudiga muuqaalka. Xulo buuxinta madow oo guji astaanta 'fx'in la doorto Jidka> Jidka Dheelitirka. Gali, gudaha Offset, 8px. Kusoo Biirista, Wareega. Iyo xadka Miter, 4.
Hadda mar kale guji astaanta 'fx' oo dooro Distor & Transform> Ubadal oo gal:
Miisaanka: Jiifka> 100% toosan> 100%
Dhaqaaq: jiif> 7px taagan> 12px
Hada aan yeelno ku dar buuxin kale. Taabo astaanta laba geesoodka ee xadka khafiifka ah oo xulo midab khafiifa. Tusaale ahaan, cadaan.
Waxaan ku darnaa buuxin kale. Xaaladeena, ee midab oranji. Waxaan ku dari doonnaa saameyn isbedel ah. Mar labaad guji astaanta 'fx' oo xulo Distor & Transform> Transform oo gal:
Dhaqaaq: jiif> 2px taagan> 2px
Waxaan dulmaraynaa dulmarka madow. Waxaan doorannaa midabka madow ee istaroogga oo waxaan siineynaa 3px. Xariif ah! Hadda si loo kaydiyo faylka> keydso. Si aad ugu kaydiso .jpg, faylka> dhoofinta (halkaasna waxaad ku dooraneysaa qaabka)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Saamaynta qoraalka majaajilada ah (cashar loogu talagalay Adobe Illustrator)
11 jees jees ah oo loogu talagalay aqoonsigaaga shirkadda
94 Naqshadaha Bokeh ee Bilaashka ah ee Loo Adeegsado Kirismaska